လမ်းပြင်တဲ့ အလုပ်သမား ၁၀၀ အတွက် မွန်မြတ်လှတဲ့ အလှူလုပ်ခဲ့တဲ့ ပရဟိတမင်းသမီးချောလေး ခိုင်နှင်းဝေ . . . » MPA
လမ်းပြင်တဲ့ အလုပ်သမား ၁၀၀ အတွက် မွန်မြတ်လှတဲ့ အလှူလုပ်ခဲ့တဲ့ ပရဟိတမင်းသမီးချောလေး ခိုင်နှင်းဝေ . . .
admin · Posted on March 14, 2019 March 14, 2019
တစ်ချိန်တုန်းက ကောင်းမွန် ပိုင်နိုင်လှတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးလက်ခံမှုချစ်ခင်မှုတို့ကို ရရှိထားခဲ့သလို
အခုလက်ရှိအချိန်မှာလည်း ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ ကိုယ်တိုင် ဦးစီးဦးဆောင်ပြီး လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပရဟိတ မင်းသမီးခိုင်နှင်းဝေကတော့ လမ်းပြင်တဲ့ အလုပ်သမား ၁၀၀ အတွက် အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေ လှူဒါန်းဖြစ်တဲ့အကြောင်း အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေက “ဒီနေ့ အစ်မပေါ့နော် တစ်လ လစဉ် အိမ်ထောင်စုအစား အစ်မ ဒီလိုမျိုးလေးတွေ လှူမယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော် ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ လမ်းလုပ်သားတွေပေါ့ ။
ဟိုတစ်ခေါက်တုန်းကလည်း လမ်းလုပ်သားတွေနဲ့ ဆိုက္ကားသမားတွေနဲ့ အလှူပေးဖြစ်တယ် အခုကျတော့ ဒီဘက်မှာ လမ်းပြင်တာတွေ အရမ်းများတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်နိုင်သလောက်ပေါ့ လူတစ်ရာစာပါ။
လူတစ်ရာစာကို အစ်မလာလှူပေးဖြစ်တာပါ။ အရမ်းဝမ်းသာတယ် အစ်မတို့က ဒီလိုမျိုး လုပ်သားတွေကို ဘာကြောင့်လှူဖြစ်လဲဆိုရင် အောက်ခြေလူတန်းစားပေါ့နော်
အဓိကတော့ အလုပ်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေအခုက နေအရမ်းပူတယ်လေ အစ်မတို့အခု လာလှူတာလေးကိုတောင် အရမ်းပင်ပန်းတယ်။
သူတို့ဆို တစ်နေကုန်လုပ်နေရတာ ကတ္တရာစီးတွေနဲ့ ကျောက်မှုန်တွေကြားထဲမှာ လုပ်နေရတဲ့ အခါကျတော့ အစ်မ ကိုယ်ချင်းလည်းစာတယ် ကိုယ်ကတော့ ဒီလမ်းတွေ ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာ အဲကွန်းနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းဖြတ်တယ်။
သူတို့လည်း သူတို့အလုပ်ဆိုပေမယ့် အလုပ်ကို တန်ဖိုးထားပြီး လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကို အစ်မ လှူပေးချင်တယ်ပေါ့နော်။
ပထမက အစ်မ စတုဒီသာကျွေးဖို့စဉ်းစားထားတာ ဒံပေါက်ကျတော့ နေပူတယ်ပေါ့နော် ကြက်ဆီထမင်းလိုက်ကျွေးမယ်ပေါ့နော် အအေးနဲ့ အဲ့အခါကျတော့လည်း သယ်ရပြုရတာ အလုပ်ရှုပ်တာချင်းအတူတူ သူတို့စားနိုင်တယ် သူတို့ဒီမှာ ထမင်းစားရမယ် သူတို့ စားနိုင်လည်း တစ်နပ်ပေါ့နော်။
အစ်မတို့က အိမ်ထောင်စုကို လှူသလိုပေါ့ စီးပွားရေးတစ်ခုထူထောင်မယ် ဟိုတစ်ခေါက်ကဆို အစ်မ မှော်ဘီကိုသွားတယ်. .
ကလေးမွေးသွားပြီးတော့ ကလေးကတော့ အသက်မရှင်ဘူးပေါ့နော် သူ့မိခင်လက်ထဲကို ပြန်အပ်တဲ့ အခါကျတော့ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုအနေနဲ့ ထူထောင်ပေးလိုက်တယ်။ အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ အစ်မတို့က လုပ်နေတယ်။
Page မှာတော့ တင်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ နောက် ကလေးတွေ ဆေးဝါးမကုသနိုင်တဲ့ ကလေးတွေ အစ်မတို့ ဆေးဝါးကုသပေးတယ်။ နယ်ကနေ လာတယ်လာတဲ့ ကလေးတွေကို အစ်မတို့ သွားခေါ်ပေးတယ် ဆေးရုံတင်ပေးတယ်။
ပြီးတော့ ဆေးဝါးကုသုတဲ့ စားရိတ်တွေ အစ်မတို့ ထောက်ပံ့ပေးတယ်။ ဒါတွေကျတော့လည်း အစ်မ အမြဲတမ်းလိုလိုတော့ မတင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ အဲ့တော့ လူတွေက အစ်မရဲ့ ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်မရှိဘူးလို့ ထင်နေမှာဆိုးလို့။”လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။crd
ပရဟိတမင်းသမီးချောလေး ခိုင်နှင်းဝေကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပီတိဖြစ်ဂုဏ်ယူစွာ အများသိအောင် သာဓုခေါ် shareပေးကြပါအုံးနော်။
တဈခြိနျတုနျးက ကောငျးမှနျ ပိုငျနိုငျလှတဲ့ သရုပျဆောငျမှုတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးလကျခံမှုခဈြခငျမှုတို့ကို ရရှိထားခဲ့သလို
အခုလကျရှိအခြိနျမှာလညျး ပရဟိတလုပျငနျးတှေ ကိုယျတိုငျ ဦးစီးဦးဆောငျပွီး လုပျကိုငျနတေဲ့ ပရဟိတ မငျးသမီးခိုငျနှငျးဝကေတော့ လမျးပွငျတဲ့ အလုပျသမား ၁၀၀ အတှကျ အခွခေံစားသောကျကုနျတှေ လှူဒါနျးဖွဈတဲ့အကွောငျး အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
ခိုငျနှငျးဝကေ “ဒီနေ့ အဈမပေါ့နျော တဈလ လစဉျ အိမျထောငျစုအစား အဈမ ဒီလိုမြိုးလေးတှေ လှူမယျလို့ စဉျးစားထားတယျပေါ့နျော ဒီနဆေို့ရငျတော့ လမျးလုပျသားတှပေေါ့ ။
ဟိုတဈခေါကျတုနျးကလညျး လမျးလုပျသားတှနေဲ့ ဆိုက်ကားသမားတှနေဲ့ အလှူပေးဖွဈတယျ အခုကတြော့ ဒီဘကျမှာ လမျးပွငျတာတှေ အရမျးမြားတယျဆိုတော့ ကိုယျနိုငျသလောကျပေါ့ လူတဈရာစာပါ။
လူတဈရာစာကို အဈမလာလှူပေးဖွဈတာပါ။ အရမျးဝမျးသာတယျ အဈမတို့က ဒီလိုမြိုး လုပျသားတှကေို ဘာကွောငျ့လှူဖွဈလဲဆိုရငျ အောကျခွလေူတနျးစားပေါ့နျော
အဓိကတော့ အလုပျကို တနျဖိုးထားတဲ့လူတှအေခုက နအေရမျးပူတယျလေ အဈမတို့အခု လာလှူတာလေးကိုတောငျ အရမျးပငျပနျးတယျ။
သူတို့ဆို တဈနကေုနျလုပျနရေတာ ကတ်တရာစီးတှနေဲ့ ကြောကျမှုနျတှကွေားထဲမှာ လုပျနရေတဲ့ အခါကတြော့ အဈမ ကိုယျခငျြးလညျးစာတယျ ကိုယျကတော့ ဒီလမျးတှေ ဖွတျသှားတဲ့အခါမှာ အဲကှနျးနဲ့ ငွိမျ့ငွိမျ့ညောငျးညောငျးဖွတျတယျ။
သူတို့လညျး သူတို့အလုပျဆိုပမေယျ့ အလုပျကို တနျဖိုးထားပွီး လုပျတဲ့သူတှအေတှကျကို အဈမ လှူပေးခငျြတယျပေါ့နျော။
ပထမက အဈမ စတုဒီသာကြှေးဖို့စဉျးစားထားတာ ဒံပေါကျကတြော့ နပေူတယျပေါ့နျော ကွကျဆီထမငျးလိုကျကြှေးမယျပေါ့နျော အအေးနဲ့ အဲ့အခါကတြော့လညျး သယျရပွုရတာ အလုပျရှုပျတာခငျြးအတူတူ သူတို့စားနိုငျတယျ သူတို့ဒီမှာ ထမငျးစားရမယျ သူတို့ စားနိုငျလညျး တဈနပျပေါ့နျော။
အဈမတို့က အိမျထောငျစုကို လှူသလိုပေါ့ စီးပှားရေးတဈခုထူထောငျမယျ ဟိုတဈခေါကျကဆို အဈမ မှျောဘီကိုသှားတယျ. .
ကလေးမှေးသှားပွီးတော့ ကလေးကတော့ အသကျမရှငျဘူးပေါ့နျော သူ့မိခငျလကျထဲကို ပွနျအပျတဲ့ အခါကတြော့ အိမျထောငျစုတဈခုအနနေဲ့ ထူထောငျပေးလိုကျတယျ။ အဲ့လိုမြိုးလေးတှေ အဈမတို့က လုပျနတေယျ။
Page မှာတော့ တငျဖွဈတာပေါ့နျော။ နောကျ ကလေးတှေ ဆေးဝါးမကုသနိုငျတဲ့ ကလေးတှေ အဈမတို့ ဆေးဝါးကုသပေးတယျ။ နယျကနေ လာတယျလာတဲ့ ကလေးတှကေို အဈမတို့ သှားချေါပေးတယျ ဆေးရုံတငျပေးတယျ။
ပွီးတော့ ဆေးဝါးကုသုတဲ့ စားရိတျတှေ အဈမတို့ ထောကျပံ့ပေးတယျ။ ဒါတှကေတြော့လညျး အဈမ အမွဲတမျးလိုလိုတော့ မတငျဖွဈဘူးပေါ့နျော။ အဲ့တော့ လူတှကေ အဈမရဲ့ ပုံမှနျလုပျငနျးစဉျမရှိဘူးလို့ ထငျနမှောဆိုးလို့။”လို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။crd
ပရဟိတမငျးသမီးခြောလေး ခိုငျနှငျးဝကေို ခဈြတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ပီတိဖွဈဂုဏျယူစှာ အမြားသိအောငျ သာဓုချေါ shareပေးကွပါအုံးနျော။
Celebrity, Knowledge, News, Uncategorized, Wonders